Ungabala Isu Lokubekisa | Martech Zone
Ungabala Isu Lokubekisa
NgeSonto, Okthoba 31, 2010 NgoLwesine, Septhemba 26, 2013 Douglas Karr
Amasayithi okubekisa amabhukhimakhi athandwa ngaphezu kweminyaka eyishumi manje. Digg ubhekene nezinhlungu ezithile ezibalulekile njengamanje kepha usabopha ingxenye enkulu emakethe. StumbleUpon, Reddit futhi Delicious isaqhubeka nokukhula unyaka nonyaka.
Ngenkathi amasayithi afana ne-Facebook ne-Twitter amnandi ngokwazisa izixhumanisi ngendlela efike ngesikhathi ngokusebenzisa inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu, inani lokuvakashelwa lizokhuphuka liye phezulu bese liwela kulutho njengoba kungena igagasi elilandelayo lezinto zezindaba. Amasayithi wokubekisa awanikezeli 'bangafi… bangakwazi ukuvusa okuqukethwe okudala noma bacindezele okuqukethwe okulungile kwisiphequluli somsebenzisi esifanele ngale kwalokhu kunikezwa yimithombo yezokuxhumana.
I-Social Bookmarking isakhula ngokuthandwa
Amathiphu amane kuhlelo olukhulu lweBhukumaka
Sebenzisa isiza ngasinye ngokukhuthaza izixhumanisi ezifanele izethameli zakho kanye nezihloko ofisa ukwakha igunya kuzona. Uma umane uphakamisa izixhumanisi zakho, uzobukeka nje njengogaxekile futhi uzonakwa kakhulu.
Thuthukisa ama-akhawunti akho ngesayithi ngalinye lebhukhimakhi kwinethiwekhi yakho yokuxhumana kanye nezivakashi zesiza sakho ukuze bakwazi ukuxhumana nawe kusayithi abathanda ukulisebenzisa.
Ungazibali izinjini zokubekisa ezingathandwa noma ezintsha. Imvamisa, uzothola ukuthi inani eliphansi labasebenzisi lingazuza ukukhushulwa kwakho. Abokuqala ukuthola ngokuvamile banethonya elikhulu, ngakho-ke ukutholakala lapho kungasabalalisa igama ngokushesha emizamweni yakho.
Amasayithi aphezulu we-Bookmarking
Yahoo! I-Buzz - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-16 zanyanga zonke.
Reddit - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-15 zanyanga zonke.
StumbleUpon - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-15 zanyanga zonke.
Delicious - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-5 zanyanga zonke.
I-Mixx - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-2 zanyanga zonke.
Fark - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.8 zanyanga zonke.
Slashdot - izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.7 zanyanga zonke.
Izindabavine - Abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-1.3 ngenyanga.
Diigo - Abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-1.2 ngenyanga.
I-imeyili ifile? Ungakutsheli lokho kuJenni noJanneane
Nov 1, 2010 ngo-8: 48 AM
Ithiphu enhle. Ngabe kukhona okunye okuthunyelwe okuchaza okuncane mayelana nokuthi lawa masayithi abhukimakhi asebenza kanjani?
Nov 1, 2010 ngo-9: 22 AM
Sawubona Kenan! Ngibhalile ngeStumbleupon (https://martech.zone/blogging/stumbleupon-blog-traffic/) kancane kepha hhayi bonke abanye. Ngamunye wabo usebenza ngokuhlukile… kepha okuvamile ukuthi bayakuvumela ukuthi uhlele amabhukhimakhi akho. Okumnandi kunokuhlanganiswa okuhle kwesiphequluli ukuze ungene ngemvume kusuka noma yikuphi futhi ubone amabhukumaka akho.
Ngokukuvumela ukuthi ubeke uphawu lokubekisa isayithi, uliphakamise noma ulabe nabangani, ulimake ngamagama afanele okusesha, isiza sakho singatholwa lula ngabantu abanezintshisakalo ezifanayo. Cabanga ngakunye njengenjini yokusesha 'encane' enokuqukethwe okuthandwa kakhulu okutholakala kakhulu futhi amathani omgwaqo adudulelwe kuyo.
Nov 5, 2010 ngo-5: 11 PM
Vele ubeke uphawu loku okuthunyelwe ku-Delicious.
Ngicabanga ukuthi bangaki abathengisi bezobuchwepheshe bezinkampani abasebenzisa iSU, iDelicious nabanye?
Kodwa-ke, uma i-Twitter ne-FB zisuselwa kubasebenzisi be-cubicle yi-corp IT, mhlawumbe izingosi zokubekisa zenhlalo zingenye indlela yokufinyelela abantu…
Jun 9, 2016 ku-12: 31 PM
Bengingazi ukuthi ibhukumaka isasebenza namuhla
Jun 9, 2016 ku-12: 35 PM
Le ndatshana icishe ibe neminyaka engu-5, kepha sisathola imiphumela ebalulekile ngeStumbleUpon kokuqukethwe okudumile - njenge-Infographics noma ama-White Papers.